Global Voices teny Malagasy » Bahrain: “Vehivavy Mafy Toy Ny Vy Ny Vehivavintsika” · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 11 Septambra 2012 6:20 GMT 1	 · Mpanoratra Amira Al Hussaini Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Bahrain, Iràka, Tiorkia, Hehy, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Vehivavy sy Miralenta
Nihataka kely tamin'ny politika indray aloha ny Bahraini mpampiasa Twitter ary nandany andro ny maraina teo (3 septambra) tao amin'ny tambajotran'ny fitoraham-bilaogy sosialy kiritika. Namaky lahatsora-baovao ilay mpanakanto Anas Al Shaikh izay milaza fa namono tena ity vehivavy Irakiana iray ho fanoherana ny fijerem-badiny andian-tantara mitohy Tiorka amin'ny fahitalavitra.
Nandimby ny andian-tantara mitohy Meksikàna amin'ny fahitalavitra tamin'ny taona lasa ity avy any Torkia ity. Misy dikanteny Arabo, malaza amin'ireo mpanaraka azy ity andian-tantara ity, izay matetika maharitra amam-bolana.
Nizara ilay ampaham-baovao mampilendalenda ho an'ireo mpanaraka ny Twitter-ny i Al Shaikh sady nanontany:
@Anas_Al_Shaikh: Singam-baovao iray tanaty gazety .. Nandoro ny tenany mandra-pahafatiny ny vehivavy Irakiana iray mba hanoherany ny fijerem-badiny andian-tantara Tiorka amin'ny fahitalavitra. Maninona isika no tsy naheno hoe nanao zavatra sahala amin'izany ihany koa ny vehivavy Bahraini? hahaha
Tsy very akory ny lalaon-teny ary niteraka fihetseham-po maro ilay tsikera.
Efa teo amin'ny laharana voalohany tamin'ny hetsi-panoherana fandavana ny goverenmanta ny vehivavy Bahraini izay nanomboka tany Bahrain tamin'ny Febroary 2011. Sary flickr avy amin'ny Al Jazeera amin'ny teny Anglisy nampiasaina tamin'ny alalana (CC BY-SA 2.0)
Hoy i Um Salman:
@Umsalman2011: Satria matotra ny vehivavy Bahraini, fantany fa tsy dia midika inona tokony hamonoany tena ny andian-tantara Tiorka amin'ny fahitalavitra na koa zavatra hafa mitovy amin'izany.
Manampy i Esraa:
@esraa_f_84 : Aleo izy hijery. Rehefa hariva ny andro, tsy manana afa-tsy izay eo anatrehany ihany izy [ny vadiny]. Ahavita inona moa izy raha mijery azy ireo fotsiny? Angaha izy andeha hitsidika azy ireo na koa hoe hivoaka ny fahitalavitra angaha ireo hankeo aminy?
Ary nanoratra toy izao i Fatima Salim:
@Fatim_Sam : Mahatanty dona kokoa ny vehivavy Bahraini. Vehivavy mafy toy ny vy ireo.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/09/11/37953/